Booliska Kisumu oo lagu amaanay dagaalka ka dhanka ah burcadda – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska Kisumu oo lagu amaanay dagaalka ka dhanka ah burcadda
Ciidamada ammaanka ee ka howl gala deegaannada kala duwan ee maamul goboleedka Kisumu ayaa si weyn loogu bogaadiyay sida ay sare ugu qaadeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha burcadda ah ee dhibaateeya shacabka.
Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan maamulkaasi Mohammed Maalim ayaa booliska kisumu ku amaanay in ay wax badan ka qabteen mushkiladda ay kooxaha hubeysan ku hayeen bulshada.
Sarkaalkan ayaa sheegay in 6-dii isbuuc ee lasoo dhaafay ay laamaha amaanka xoojiyeen amniga gobolka, isla markaana ay fuliyeen howlgallo lagu soo qabtay hub iyo rasaas.
Macalin ayaa intaas ku daray in waqtigaas gudihiisa ay booliska gacanta kusoo dhigeen 4 qori oo 2 ka mid ah uu noocooda yahay AK47 iyo 90 wareeg oo rasaas ah.
Khamiistii lasoo dhaafay ayey ahayd markii ay booliska Kisumu xabsiga u taxaabeen nin lagu tuhunsanyahay burcadnimo oo sin weyn loo doon doonayay, laguna eedeeyay in uu masuul ka ahaa falal badan oo amni darro ah.
Xariga ninkaasi ayaa yimid 1 isbuuc ka dib marikii ay booliska Kisumu toogasho ku dileen 4 nin oo lagu tuhmay burcadnimo, iyagoo isla xiligaasna mid kale kusoo xiray howlgalkaas oo ay ka fuliyeen xadka kala qeybiya magaalooyinka Kisumu iyo Bondo.
← Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo cafis u fidiyay maxaabiis
Kooxda ISIL oo dagaal adag ugu jirta difaacashada magaalada Mosul →